I-SonoStep - Ukulungiselela Isampula ku-Isinyathelo Esisodwa
I-SonoStep ihlanganisa i-ultrasonication, ivuselela futhi ifake amasampula kumklamo we-compact. Kulula ukusebenza futhi ingasetshenziswa ukuletha amasampuli azinikeziwe kumadivaysi okuhlaziya, isib. Ukulinganisa usayizi wezinhlayiyana.
Ultrasonication kusiza ukusabalalisa izinhlayiya ze-agglomerated ukulungiselela nokuhlaziywa kwe-particle dispersions kanye ne-emulsions. Lokhu kubalulekile, uma ulinganisa usayizi wezinhlayiyana, isibonelo ngokusabalalisa ukukhanya okunamandla noma ukuhlukanisa ukukhanya kwe-laser.
Elula futhi ephumelelayo
Ukusetshenziswa kwamandla e-ultrasonic kwisampuli esabuyiselwayo kudinga izingxenye ezine: umkhumbi ovuthayo, i-generator ultrasonic kanye ne-transducer kanye nepompo. Zonke izingxenye zixhunywe yi-hoses noma amapayipi. I kuhlelwe ngakwesokudla ikhombisa ukusetha okujwayelekile.
I-SonoStep ihlanganisa amandla e-ultrasonic kanye nepompo ye-centrifugal ibe yi-beaker ensimbi engenalutho ekhuni. Chofoza ku-graphic ngakwesokudla somdwebo wesimiso. I-SonoStep ixhunywe kudivayisi yokuhlaziya – yilokho kuphela.
Sonication ehambisanayo yokuthola imiphumela engcono
I-ultrasonication yamasampuli akho ithuthukisa ukunemba kobukhulu bakho bezinhlayiya noma i-morphology measurement, njengoba i-SonoStep yenza imisebenzi emithathu ebalulekile:
Ukuhlakazeka / ukuguqula
I-ultrasound de-aerates i-liquid futhi ngaleyo ndlela ivimbela ama-bubbles amancane ukuba angaphazamisi isilinganiso. Ihambisa ivolumu yesampula ngezinga lokugeleza eliguquguqukayo futhi lihlakaza izinhlayiya kulolu ketshezi. Amandla e-ultrasonic asetshenziswa ngokuqondile ngaphansi kwe-rotor yepompo futhi eqinisekisa ukuthi izinhlayiya ezigcwalayo ziyahlakazeka ngaphambi kokuba zilinganiswe. Lokhu kuholela eminye imiphumela engaguquguquki futhi ephindaphindiwe.
iprosesa ye-ultrasonic, Ama-watts angu-100, imvamisa ye-ultrasonic 30kHz, i-microprocessor elawulwayo, uhlelo lokuvota okuvama okuzenzakalelayo, ukulinganisa okungu-20 kuya kwezingu-100%, isignali yokukhishwa kwe-propeller eguquguqukayo 20 kuya kwezingu-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, nge-interface encane engu-15 (0-10V noma i-UPC-Control), ngamathuluzi aphakanyisiwe, angenasinakha izindlu ze-IP65, i-IP65 ibanga, i-titanium resonator, umbhangqwana we-thermo (AISI316Ti) obonisa ukudijithali, imitha yamandla kagesi, i-O-Rings eyenziwe nge-EPDM, i-rotor steel stainless detachable (AISI316Ti) yokuxubha nokugqugquzela, isihlangu sama-acrylic sokunciphisa umsindo ukuvikelwa kokufafaza (LxWxH): 280x210x150mm, isisindo: 3.2kg
Ukusabalalisa okuMandla nokuKhanya okuPhezulu kokuKhanya kweSahluko kanye nokulinganisa kobunjwa
I-Microtrac® S3500 Ukulinganisa Usayizi Wezinhlayiyana nge-Laser Light Diffraction